Hausa Jamb cbt expo verified jamb 2022 expo » Oliveloaded || Nigeria Most Rated Education and Informations Portal
Hausa Jamb cbt expo verified jamb 2022 expo
Nabata na Oliveloaded No #1 JAMB ziri ezi CBT Ajụjụ na Azịza 2021 Portal udomo oro. Naanị anyị na-etinye ihu ọchị n’ihu ndị na-eme ntuli aka n’egbughị oge ma ọ bụrụhaala na JAMB, WAEC, NECO na NABTEB bụ nchegbu na Nigeria na mba ofesi. Ị so na ndị na-aga akwụkwọ na-ede 2021 JAMB, mgbe ahụ ị rutere na webụsaịtị kachasị mma nke na-enyocha ule niile na mba niile. Biko dejupụta fọm iji nyefee nọmba ekwentị gị maka mmelite efu na mmemme na-abịanụ nke 2021/2022 JAMB.
Site na enyemaka Jamb Expo anyị, ị nwere ike ị nweta akara dị elu dị 280 ruo 350 na ule UTME gị 2021. Echefula ịkpọ ndị enyi gị ka ha bịa na tebụl enyemaka Jamb anyị. Biko edebanyela aha na webụsaịtị ọ bụla nke na-egosighi nsonaazụ JAMB 2020 sitere n’aka ndị enyemaka enyere aka. Mara ihe ma tụkwasa ndị na-ere jamb n’ezie.
NB : Joint Admission and Matriculation Board, JAMB Expo ewepụtala iji NIN maka ndebanye aha UTME 2021.
Ọzọkwa na nke a n’elu ikpo okwu, ego azụ nkwa a na-atụle, ma ọ bụrụ na i meghị ruo 250 na n’elu dị ka nkwa. Ị ga-enwetaghachi ego gị.
N’ihi arịrịọ ndị Candidates maka ngwungwu Kọmputa, anyị ewebatala Direct to System Package ebe onye ndoro-ndoro nwere ike zaa ajụjụ ya na Desktọpụ. Ihe ọma anaghị adị mfe, ọnụ ahịa D-system bụ N20,000. Ọtụtụ ndị na-eme ntuli aka nwere ike ọ gaghị ama usoro a. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịbanye na ajụjụ gị abanyelarị akara, gafee lelee azịza ndị nwere akara wee nyefee.
JAMB CBT 2022 SURE EXPO JAMB CBT 2022 SURE EXPOJAMB CBT 2022 SURE EXPOJAMB CBT 2022 SURE EXPO
Ị na-ede JAMB 2021, ọ bụrụ ee, nyefee nọmba ekwentị gị ka ị nweta mmelite JAMB n’efu, pịa ebe a
NB: Ịnyefe nọmba ekwentị gị ga-enye gị ọtụtụ uru, ị ga-enweta ndụmọdụ ndị a;
Mgbe a ga-ere akwụkwọ JAMB
Ngwakọta isiokwu ịhọrọ tupu itinye nyocha Post UTME.
Mmelite efu na nkwalite nkesa JAMB.
Ndị debanyere aha ga-enwe mmasị na mmepe ọhụrụ na JAMB.
Soro ndị debanyere aha VIP anyị ka ị nụ ụtọ ihe niile dịka ọ na-eme. Ndị VIP bụ ndị na-aga ime ndebanye aha n’etiti Jenụwarị na Febụwarị 2021.
Ị nweghị ike ịpụpụ ihe niile a kpọtụrụ aha n’elu, ụzọ kachasị mma iji mee ka ndị na-eme egwuregwu anyị na-emelite kwa ụbọchị.
Isiokwu JAMB Expo 2021 dị
Ndepụta ọnụahịa ndenye aha:
Ihe niile JAMB>>>>N25.000
JAMB 4 Ihe >>>> N7.000
JAMB 3 Ihe >>>> N6.000
JAMB 2 Ihe >>>> N4.000
JAMB Kwa isiokwu>>>> N2.000
Mgbe nkwụnye ego / mbufe, zipu
Ndebanye aha Jamb gị (dị mkpa)
Ụbọchị/Oge ule (ọ bụrụ na ọ dị … ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kwụọ ụgwọ gị ma ziga mgbe ọ dị njikere)
Isiokwu 4 gị
Aha nkwụnye ego/Nfefe
Ọnụ ego akwụgoro
Ụbọchị ịkwụ ụgwọ: 07062277854
Aha: Abdullahi Ganduje
Nọmba nọmba: 9737694GB,
Ụbọchị/oge ule: Jan/15/2019, n’elekere asaa nke ụtụtụ
Ihe omume: Maths, Eng, Phy, Chem
Nọmba ekwentị: 0802345****3
Aha nkwụnye ego; Abdullahi,
Akwụụrụ m N7,000 na 18th nke Febụwarị 2021
Otu onye ọrụ JAMB bịara dị ọcha, anyị anụla ọtụtụ ndị na-azọ ọkwa ka ọtụtụ n’ime afọ gara aga na-ebe akwa na-enweghị nchịkwa n’ihi ọtụtụ ndị aghụghọ na-ekwu na ha na-enyere aka n’otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na njedebe ọ nweghị ihe pụtara. Anyị na-adụ ọdụ ka ị kwụsị na ha ma na-agba ọsọ ọsọ dị ka i nwere ike mgbe ị hụrụ ha online. N’ezie ị nwere ike ịmata ha. Ihe ọ bụla anyị na-ekwu bụ ihe anyị na-eme. Ọ nweghị ụlọ ọrụ nwere ike ịchọpụta ihe nzuzo anyị ma ọ bụ sistemu anyị were were buru ndị na-azọ ọkwa anyị.
NB : Biko a dụrụ gị ọdụ ka ị zere ndị scammers, ọtụtụ weebụsaịtị na-ekwu na ha na-enyere ndị na-eme ntuli aka aka mana ole na ole dị adị na azụmahịa ahụ.
Tupu anyị abanye n’ime nkọwa, a na-atụ anya ka ị denye aha tupu ndebanye aha JAMB ka ị so na ndị VIP.
Ndị niile debanyere aha n’akwụkwọ n’afọ gara aga maara na ndebanye aha JAMB na-amalite site n’ụlọ, maka ndị ga-azọ ọkwa ọhụrụ bụ ndị ọhụrụ na usoro a.
Keywords: Tag:-JAMB UTME Expo/Runs 2021, JAMB CBT Expo 2021, JAMB Expo 2021, JAMB Runs 2021, Real JAMB Answers 2021, Verified JAMB Runz 2021, Online JAMB Azịza 2021 gara aga Ajụjụ 2021 JAMB na ajụjụ 2021 gara aga. , CBT JAMB exam Azịza 2021, JAMB na WAEC Expo 2021, JAMB na NECO Runz 2021, JAMB Expo Runs 2021, JAMB Computer Based Test Centres, Otu esi enweta JAMB Expo 2021, ka esi enweta JAMB na-agba ọsọ 2021 JAMB 2021 Real. Expo WhatsApp Group Link, JAMB na-agba ọsọ Verified use of English Answers 2021, jamb 2021 sure expo , jamb utme expo, jamb umte verified answers, jamb 2020/2021 utme expo, 2020/2021 jamb utme na-agba ọsọ, jamb2020 cbt/2 Achọrọ m jamb cbt 2020/2021 expo, cbt/utme jamb 2020/2021 Runs.best. A tụkwasịrị anyị obi wee nwalee *Ndị debanyere aha na DATABASE anyị ka a ga-enye ohere ịnweta ajụjụ na azịza nkeonwe ha niile. n’ihi na ọ dịghị mfe itinye nke a ọnụ. Gaa na webụsaịtị anyị Refer 2021 jamb cbt expo Kpọọ anyị 07062277854/2021 JAMB RUNZ, 2021 JAMB RUNS, 2021 JAMB EXPO, JAMB RUNZ, JAMB EXPO, JAMB RUNS,2021 JAMB runs/runs expo runs/runz, 2021 jamb expo, 2021 jamb answers, 2021 jamb cbt runz/runs,Free JAMB Runz 2021 2021/2021 Correct Expo, JAMB 2021/2021 Na-agba ọsọ , JAMB Azịza , JAMB CBT 2021 Na-agba ọsọ , JAMB CBT EXPO, azịza